Habee Meelaha Gaaban ee Jetpack Shortcode | Martech Zone
Markii WordPress sii daayay Jetpack plugin, waxay fureen celcelis ahaan rakibidda WordPress illaa astaamo waaweyn oo waaweyn oo ay ku jiraan xalkooda martigelinta. Marka aad awood u yeelatid qalabka, waxaad awood u siineysaa tan astaamo ah, oo ay ku jiraan shortcodes. Marka la eego, WordPress uma ogolaato qoraagaaga celceliska inuu ku daro qoraalka warbaahinta dhexdeeda waxa ku jira qoraal ama bog. Kani waa astaan ​​amni oo loola jeedo in la yareeyo fursadaha khalkhal gelinta bartaada.
Si kastaba ha noqotee, iyada oo la adeegsanayo lambarrada gaaban, adeegsadahaagu si fudud ayuu ugu dhejin karaa warbaahinta. Tusaale ahaan, si aad ugu dhex gasho fiidiyow Youtube ah, looma baahna in lagu daro qoraalka qoraalka ah - waxaad uun dhigaysaa URL-ka la wadaago ee fiidiyowga tifaftiraha qoraalka. Isku-darka koodhadhka gaagaaban ayaa tilmaamaya waddada wuxuuna ku beddelayaa URL-ka lambarka muuqaalka dhabta ah ee fiidiyowga. Ma jiro buuq, arrimo la'aan!
Mid mooyee. Adiga oo adeegsanaya furaha gaagaaban, balaca warbaahintaada gundhigga ah ayaa kaliya cilado ah. Marka Youtube ayaa laga yaabaa inuu ka sii ballaadho ballaadhka mawduucaaga oo ku dul daadata dhinacaaga - ama Slideshare waxay qaadan kartaa kala badh booska ay qaadan karto. Waxaan qaatay dhowr saacadood oo dhammaystiran iskuday aan ku aqoonsaday sida loo qoro miirayaasha qaarkood si aan ugu beddelo ballaadhinnada toobiye kasta oo gaar ah. Waxaan dib u eegay tan kumbuyuutar ah si aan u arko haddii uu jiro mid horeyba uga jiray.
Ka dibna waxaan ka helay… wax ka beddel yar oo dhalaalaya oo WordPress ku daray API-kooda. Dejin aad ku dhejin karto ballaca mawduuca ee ku yaal bogaggaaga iyo qoraaladaaga:
haddii (! isset ($ content_width)) $ content_width = 600;
Isla markii aan ku dhejiyay balacdan feylasha shaqadeyda.php, dhammaan qalabka toobiye ee gundhigga ah ayaa si habboon loo sarreeyay. In kasta oo aan ku faraxsanahay in kaliya ay qaadatay khad koodh ah, waxaan ahay mid aad u walaacsan oo ay qaadatay waqti aad u dheer in tan la helo. Xitaa xiisaha badan ayaa ah la'aanta habeynta la heli karo Jetpack. Tusaalooyinka gaagaaban, tusaale ahaan, lama naafoobi karo - waa la kartiyeeyaa illaa inta qalabku shaqeynayo.
Waxay ahaan laheyd mid dhalaalaya, tusaale ahaan, in lagu daro ugu badnaan ballaca iyo dhererka dejinta toos ah Jetpack Dejinta Shortcode. WordPress waa madal aan caadi aheyn, laakiin mararka qaarkood helitaanka xalka waxay noqon kartaa waxoogaa jahwareer ah!
Tags: heightJetpackshortcodeBallaaran slideshareballac vimeo ahwidthWordPressbalaca youtube
Maareynta Bulshada Xaqa Ayaa Loo Sameeyay